All Tenders | Ministry of Electricity and energy
DEPARTMENT AND ENTERPRISE
Department of Electric Power
Department of Hydro Power Planing
Department of Hydropower Implementation
Electicity Supply Enterprise
Hydropwer Generation Enterprise
Myanmar Electric Power Enterprise
Yangon City Electric Supply Board
E Service Form
E-Billing with Y Pay
Internet Meter Application Form
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၁၇/၂၀၁၇)
Date: Oct 16
မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်/ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
Monday, November 20, 2017 - 16:30
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးစီမံကိန်းများဌာနမှ 66 /11 kV, 10 MVA Power Transformer (၁) လုံးကို နိုင်ငံခြားငွေ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
Monday, October 30, 2017 - 14:00
MYANMA ELECTRIC POWER ENTERPRISE
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များအတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံးမီတာ၊ ပါဝါမီတာနှင့် စီတီမီတာများအား အတန်းအစားများအလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-
Thursday, November 9, 2017 - 12:00
ELECTRICITY SUPPLY ENTERPRISE
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လိုအပ်သော Safety Equipments များကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
Tuesday, October 17, 2017 - 14:00
Date: Oct 03
အမှတ် (၂) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်စက်ရုံ (ညောင်တုန်း) မှ (၃) လအတွင်း ထွက်ရှိသော Light Naphtha များအား (၃) လအတွင်း ထုတ်ယူသည့်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချနိုင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ အမှတ် (၂) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် စက်ရုံ (ညောင်တုန်း)မှ (၃) လအတွင်း ထွက်ရှိသော Light Naphtha များအား (၃) လအတွင်း ထုတ်ယူသည့် စနစ်ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Monday, October 16, 2017 - 12:00
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း) (၁၆/၂၀၁၇)
မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ရေနံတူးဖော်/ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။
Monday, October 30, 2017 - 16:30
Date: Sep 27
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ရေအားစက်ရုံ များအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ စက်အရံပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း (DPP at Site) နှင့် လုပ်ငန်းများ အပ်နှံခြင်းတို့အား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-
Thursday, October 12, 2017 - 15:00
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့) ရှိ မြို့နယ် (၂၈) မြို့နယ် အား ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာပြုစုခြင်း၊ ငွေကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအား မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ခေါ်ယူလိုပါသည် -
Tuesday, October 10, 2017 - 12:00
Date: Sep 21
မြန်မာ့ရေနံဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း လက်အောက်ရှိ ရေနံဓာတုဗေဒစက်ရုံစု (သံပရာကန်) ၌ သိုလှောင်ထားသည့် ဓာတ်ဆီ (၁,၀၀၀,၀၀၀) ဂါလန် (ဂါလန် တစ်သန်း တိတိ) အား တင်ဒါခေါ်ယူရောင်းချမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းနိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
Ministry News, Video News
Date: Mar 04
Department & Enterprise
News & Announcemenet
©2014-2015 by Ministry of Electricity and Energy. Myanmar. All rights reserved
Powered by Ministry of Electricity and Energy | Listed in Myanmar Website.